ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ကာကွယ်လို့ရတဲ့ ရောဂါ (၁၀) မျိုး - Hello Sayarwon
ကာကွယ်ဆေးဆိုတာက ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ပြန့်နှံ့နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာတလွှားက ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေကို ထိန်းချုပ်ရာမှာ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ပေါ့။ ကာကွယ်ဆေးထိုးတာက ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ လူမှုရေးစီးပွားရေး ဝန်ပိုတွေကိုပါ လျှော့ချနိုင်တဲ့အရာပါ။
အချို့သော ရောဂါတွေ ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ ကုသနိုင်မယ့် နည်းလမ်းမရှိဘဲ အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီလို ရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းက ကာကွယ်ဆေး ထိုးတာပါ။
ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာတလွှားက နိုင်ငံအတော်များများမှာ ရေကျောက်ရောဂါနဲ့ ပိုလီယိုရောဂါ ကင်းစင်ခဲ့ရတာ ကာကွယ်ဆေးတွေကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေးက ရောဂါတွေကို ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရာမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။
ဘေဘီလေးတွေကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ကာကွယ်ဆေးတွေ စုံလင်အောင် ထိုးနှံပေးတာဟာ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ကြီးပြင်းလာစေနိုင်ရုံမကဘဲ အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာလည်း ရောဂါတွေ ခံစားရနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးရာရောက်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ကာကွယ်လို့ရတဲ့ ရောဂါ များ
ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးအတိုင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကာကွယ်လို့ရမယ့် ရောဂါတွေကတော့
အဆုတ်နဲ့ လေပြွန်တွေအပါအဝင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ကို ဗိုင်းရပ်စ် ဝင်ရောက်ကူးစက်တဲ့ ကူးစက်မြန်ရောဂါ တစ်မျိုးပါ။
ဘယ်လို ကူးစက်နိုင်လဲ – ဝက်သက်ဗိုင်းရပ်စ်က ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူ နှာချေချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါ လေထဲကနေတဆင့် အခြားသူဆီ ကူးစက်သွားပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က ရောဂါပိုးရှိသူ ထိတွေ့ထားတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေအပေါ်မှာ အချိန်အားဖြင့် ၂ နာရီလောက် ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါရှိသူနဲ့ အနီးကပ်နေထိုင်သူတွေက ကိုယ်ခံအား မကောင်းဘူးဆိုရင် ဝက်သက်ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်လဲ – ဝက်သက်က အဆုတ်ရောင်စေတာ၊ ဦးနှောက်ရောင်တာ၊ သေဆုံးတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး မပေါ်ခင်ကဆိုရင် နှစ်စဉ် ဝက်သက်ကြောင့် လူဦးရေ ၃ သန်းကနေ ၄ သန်းလောက်အထိ ကူးစက်ခံနေရပြီး လူဦးရေ ၄၀၀ ကနေ ၅၀၀ လောက် သေဆုံးနေရပါတယ်။
ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ – ဝက်သက်၊ ပါးချိတ်ရောင်၊ ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (MMR) ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကာကွယ်လို့ ရပါတယ်။
နှာခေါင်း၊ အဆုတ်နဲ့ လည်ချောင်းကို ဝင်ရောက်ကူးစက်တတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် တစ်မျိုးပါ။
ဘယ်လို ကူးစက်နိုင်လဲ – တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ် ရှိသူ တစ်ဦးဦး နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ စကားပြောရာကနေ ထွက်လာတဲ့ တံထွေးစတွေက ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ အမှုန်အစလေးတွေက ၆ ပေအထိ ရောက်ရှိပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်က လေထဲကနေတဆင့် ပြန့်နှံ့နိုင်သလို ဖျားနာနေတဲ့သူ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ထားတဲ့ အရာတွေကို ကိုင်မိမယ်၊ ပြီးရင် နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တွေကို ကိုင်မိမယ်ဆိုရင် တုပ်ကွေး ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်လဲ – နှစ်စဉ် တုပ်ကွေးကြောင့် လူဦးရေ ၄၉၀၀၀ လောက်အထိ အသက်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ တုပ်ကွေးက ပြင်းထန်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ – တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး နှစ်စဉ်ထိုးပြီး ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။
ကြွက်သားတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးပါ။
ဘယ်လိုကူးစက်နိုင်လဲ – ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်က အူလမ်းကြောင်းထဲမှာ ရှင်သန်နေပါတယ်။ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူရဲ့ အညစ်အကြေးကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်လဲ – ပိုလီယို ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ လုံးဝ လက္ခဏာ မပြတာရှိနိုင်သလို တုပ်ကွေးလိုမျိုး လက္ခဏာတွေကို ရက်အတော်ကြာ ခံစားရတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုလီယို ဗိုင်းရပ်စ်က ဦးနှောက်ကို ဝင်ရောက် ကူးစက်တဲ့အခါ အကြောသေတာ၊ သေဆုံးတာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ၂၀ ရာစုရဲ့ အပြင်းထန်ဆုံးရောဂါ တစ်မျိုးပေါ့။ ပိုလီယို ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ကမ္ဘာတလွှားမှာ ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု သိသိသာသာလျော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ – ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးနဲ့ ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။
(၄) ကြက်ညှာချောင်းဆိုး (Pertussis)
အဆုတ်ပိုးဝင်ကူးစက်မှု တစ်မျိုးပါ။ ချောင်းအပြင်းအထန်ဆိုးပြီး အသက်ရှူရခက်စေပါတယ်။
ဘယ်လိုကူးစက်နိုင်လဲ -Bordetella pertussis ဘက်တီးရီးယားကူးစက်ခံထားရသူ နှာချေချောင်းဆိုးတဲ့အခါ လေထဲကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်လဲ – အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက် ၁ နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာပါ။ ကြက်ညှာချောင်းဆိုးကနေ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ အတက်ရောဂါနဲ့ ရုတ်တရက် အသက်ရှူရပ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ – ကြက်ညှာချောင်းဆိုးကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီး ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။
(၅) Pneumococcal Disease
ဒီဘက်တီးရီးယား အမျိုးအစားက အဆုတ်ရောင်၊ နားပိုးဝင်တာ၊ သွေးဆိပ်တက်တာ အပါအဝင် ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောကို ထိခိုက်ပြီး ဦးနှောက်ရောင်တဲ့အထိ ပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကူးစက်နိုင်လဲ – ရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ သလိပ်၊ တံထွေးစတာနဲ့ထိတွေ့မှုကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်တယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်လဲ – ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်သလို သေဆုံးသည်အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ – ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါပိုးကာကွယ်ဆေး (PCV) ထိုးပြီး ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။
မေးခိုင်တာ၊ အသက်ရှူမရတာ၊ ကြွက်သားတွေ အကြောဆွဲတာ၊ အကြောသေတာ၊ သေဆုံးတာတွေအထိ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယား ကူးစက်မှုပါ။
ဘယ်လို ကူးစက်နိုင်လဲ – ဒီမေးခိုင်ပိုးက မြေကြီး၊ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ မြေဆီလွှာတွေထဲမှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ၊ အရေပြားပေါက်ပြဲမှုတွေကနေတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ရောက်ရှိကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်လဲ – မေးခိုင်ပိုးကူးစက်ခံရမှုရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က သေဆုံးမှုရှိပါတယ်။
ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ – မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
(၇) ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါ
ဘယ်လိုကူးစက်နိုင်လဲ – ရောဂါပိုးရှိတဲ့ ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ စတာတွေကို ကိုက်ထားတဲ့ ခြင်ကတဆင့် လူဆီကို ကူးစက်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်လဲ – အများစုက မပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာ ဒါမှမဟုတ် လုံးဝလက္ခဏာ မပြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရာသက်ပန် အသိဉာဏ်ချို့ယွင်းတာ၊ စကားမပြောနိုင်တာ၊ မလှုပ်ရှားနိုင်တာ၊ တက်တာ စတာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်
ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ – ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။
(၈) အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီကြောင့် နာတာရှည် အသည်းရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကူးစက်နိုင်လဲ – အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးရှိသူရဲ့ သွေး၊ ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ အခြားအရည်တွေကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးထိုးအပ်တွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကနေတဆင့် သန္ဓေသားကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ပိုးက အိတ်ချ်အိုင်ဗီရောဂါပိုးထက် ကူးစက်မှု အဆ ၁၀၀ ပိုမြန်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်လဲ – အသည်းရောဂါ၊ အသည်းကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သလို သေဆုံးသည်အထိ ပြင်းထန်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ – အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်က ပါးချိတ်မှာရှိတဲ့ တံတွေးထုတ်ပေးတဲ့ တံတွေးဂလင်းကို အဓိကထိခိုက်စေတာပါ။ တံတွေးဂလင်း ရောင်လာခြင်းက အဓိကရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုပေါ့။
ဘယ်လိုကူးစက်နိုင်လဲ – ပါးချိတ်ရောင်ရောဂါဟာ လူတစ်ဦးကနေတစ်ဦးကို တံတွေး၊ နှာရည်တို့ကနေ ကူးစက်နိုင်သလို ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေတာကနေတဆင့်လည်း ကူးစက်နိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်ရောဂါတစ်မျိုးပါ။
ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်လဲ – အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာထက် ကလေးတွေက ပိုပြီး ပြင်းထန်စွာခံစားရနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်တာ၊ ပန်ကရိယ ရောင်တာ၊ အကြားအာရုံ ဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၁၀) ဂျာမန်ဝက်သက် (Rubella)
ဂျာမန်ဝက်သက် (Rubella) က ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနီစက်တွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အနီစက်များတွေအပြင် ဖျားတာနဲ့ ပြန်ရည်ကျိတ်ရောင်တာမျိုးတွေကိုပါ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကူးစက်နိုင်လဲ – ရောဂါပိုးရှိသူ နှာချေချောင်းဆိုးရာကနေတဆင့် လွင့်စင်ထွက်လာတဲ့ နှာရည်၊ တံထွေးအစက်တွေကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ နှာရည်၊ တံထွေးတို့နဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ထိမိပြီးနောက် ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း၊ မျက်လုံးများကို ထိမိလိုက်မယ်ဆိုရင် ဂျာမန်ဝက်သက် ကူးစက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးရှိသူနှင့် အစားအတူတူစားတာ ရေ၊ အချိုရည်တွေကို အတူတူသောက်ခြင်းကနေတဆင့်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်လဲ – ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနီစက်တွေ ပေါ်လာတာ၊ ဖျားတာနဲ့ ပြန်ရည်ကျိတ်ရောင်တာမျိုးတွေကိုပါ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ – ဝက်သက်၊ ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (MMR) ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကာကွယ်လို့ ရပါတယ်။
ဒီရောဂါတွေက ဖြစ်ပွားတဲ့အခါ အသက်ကို ထိခိုက်သည်အထိ ပြင်းထန်နိုင်ပြီး ကုသဖို့အခက်အခဲ ရှိနိုင်တာကြောင့် ချစ်ရတဲ့ ဘေဘီလေးတို့ကို ရောဂါကင်းစင်ပြီး ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစွာ ကြီးပြင်းလာစေဖို့ဆိုရင် ငယ်စဉ်ကတည်းက ကာကွယ်ဆေးတွေကို စုံလင်အောင် ထိုးပေးထားဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
How immunization works? https://www.sanofi.com/en/your-health/vaccines/how-immunization-works Accessed Date 19 January 2021
CDC. Understanding How Vaccines Work https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.pdf Accessed Date 19 January 2021
You, your loved ones and vaccination https://www.sanofi.com/en/your-health/vaccines/value-of-vaccines Accessed Date 19 January 2021
CDC. Centers for Disease Control and Prevention. Understanding How Vaccines Work. [Online] 2018 [Cited: April 2019] https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.pdf Accessed Date 19 January 2021
NHS vaccination schedule https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/nhs-vaccinations-and-when-to-have-them/ Accessed Date 19 January 2021
Immunization Schedule https://kidshealth.org/en/parents/immunization-chart.html Accessed Date 19 January 2021
Top 10 Vaccine-Preventable Diseases https://www.webmd.com/children/vaccines/ss/slideshow-vaccine-preventable-diseases Accessed Date 19 January 2021
Vaccine-preventable diseases https://www.ecdc.europa.eu/en/vaccine-preventable-diseases Accessed Date 19 January 2021
Vaccine Preventable Diseases https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-pubhlth-strateg-communic-vpd.htm Accessed Date 19 January 2021